gaabinta : UoA
aasaasay : 1874
Ha iloobin in aad discuss The University of Adelaide
The University of Adelaide waa hay'ad waxbarasho iyo cilmi-heer caalami ah jaamacadda go'an in uu bixiyo waxbarasho tayo sare leh oo kala duwan, waayo-aragnimada baridda iyo cilmi-baarista.
The University of Adelaide waxaa xuddun u ah:
ogaadeen aqoonta cusub
hal-abuurnimo ku raad-
diyaarineysa madaxda bartay ee berri kuwa madax-bannaan, aqoon yahanno hal abuur leh aragti caalami ah.
The University of Adelaide xoog ka qiyamkiisa aasaasay barbaro sida ay buuxiyo hadafka ay cilmi-baarista iyo waxbarashada mustaqbalka.
University waa hay'ad caalami ah in distinctively duuban haboon ee jaamacadda cilmi, halkaas oo reyn, koboca iyo kacsi xaaraan ah raadinta aqoonta cusub waa mid ka mid ah oo ardayda oo dhan ka qayb; sida bulshada ah loo iftiimiyey, dulqaad, halkaas oo ardaydu awoodi taageero ka heli kartaa, wax walba oo asal ama xaalado; iyo sidii meel dadka Kaurna, nadaafadda asalka ah ee dalka ku jira oo xarumood ee hadda ku nasan, waxaa uu qiray iyo dhaqankooda la ixtiraamo.
The University of Adelaide muuqaalada kala
jirka A arday oo ballaadhkeeduna yahay dimuqraadi
Shaqaalaha A ee kala soocin caalamiga ah
ruuxii ka mid ah xorriyadda si ay u baaraan beeraha cusub
Dareen of muhiimadda ay leedahay in beesha
goolka A si ay u diyaariyaan madaxda waxbarashada.
The University of Adelaide kasbada in hab kala wareegto in horyaal ee jaamacadda cilmi, Oo wuxuu doondoonaa shaqaalaha caalami ah oo diirada iyo dulqaad ah, isku darka arday horusocod, taas oo ardayda muwaadinimo caalami diyaarin doonaa dunida sii kordheeysa borderless. Waxa ay noqon doontaa jaamacad run in xididada ay taariikhiga ah, weli si xamaasad leh ka go'an in ay door ku qalin saara loogu talagalay in lagu ciyaaro qaybo keentay in Century Asian ah.
Barashada iyo cilmiga koobay kala duwan oo ballaadhan ee darajo undergraduate iyo postgraduate bixiyeen Jaamacadda.
Ardayda waxaa la siiyaa gaar ah iyo guud waayo-aragnimo waxbarasho oo ka qalin sifooyinka lagu toosiyaa natiijooyinka mustaqbalkiisa. degrees Our la xiriira shuruudaha beddelo shaqo iyo baahida warshadaha iyo bulshada.
Juqraafiga, Environment and Population
Kulliyadda Engineering, Computer & Xisaabeed Sciences
School of Civil, Deegaanka & Engineering Macdanta
School of korontada & Engineering Electronic
Xisaabta daahir ah
School of Ilkaha
dhalmada & dumarka
Ganacsi, Commercialisation & Innovation Centre (ECIC)
School of Beeraha, Cuntada & Wine
Ma rabtaa discuss The University of Adelaide ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: The University of Adelaide rasmiga ah Facebook